I-Calculator: Bala Usayizi Wamasampula Wakho Wokucwaninga Okuncane | Martech Zone
I-Calculator: Bala Usayizi Wesampula Wakho Wokucwaninga Okuncane
ULwesine, April 22, 2021 ULwesine, April 22, 2021 Douglas Karr
Ukwenza inhlolovo nokuqinisekisa ukuthi unempendulo evumelekile ongabeka izinqumo zakho zebhizinisi kuyo kudinga ubuchwepheshe obuningi. Okokuqala, kufanele uqinisekise ukuthi imibuzo yakho ibuzwa ngendlela engakhethi impendulo. Okwesibili, kufanele uqinisekise ukuthi uhlola abantu abanele ukuthola imiphumela evumelekile ngokwezibalo.
Awudingi ukubuza wonke umuntu, lokhu kungasebenza kakhulu futhi kubize kakhulu. Izinkampani ezenza ucwaningo lwezimakethe zisebenza ukufinyelela ezingeni eliphakeme lokuzethemba, umkhawulo ophansi wephutha ngenkathi ifinyelela inani elincane labamukeli elidingekayo. Lokhu kwaziwa njenge- usayizi wesampula. Ungu amasampula iphesenti elithile labantu bebonke ukuthi bathole umphumela ohlinzeka ngezinga le- ukuzethemba ukuqinisekisa imiphumela. Usebenzisa ifomula eyamukelwa kabanzi, unganquma okuvumelekile usayizi wesampula lokho kuzomela umphakathi wonkana.
Uma ufunda lokhu nge-RSS noma nge-imeyili, chofoza kusayithi ukusebenzisa ithuluzi:
Bala Inhlolovo Yakho Yesampula Yocwaningo
Kusebenza Kanjani Ukwenza Isampula?
Ifomula Yokunquma Usayizi Oncane Wesampula
Ifomula yokunquma usayizi wesampula oyisisekelo esidingekayo kubantu abanikeziwe imi kanje:
S = Ubuncane besayizi yesampula okufanele uyihlole unikezwe okokufaka kwakho.
N = Usayizi wabantu bonke. Lobu ubukhulu besigaba noma isibalo sabantu ofisa ukusihlola.
e = Umugqa Wephutha. Noma kunini lapho usampula inani labantu, kuzoba nomugqa wephutha emiphumeleni.
z = Ungaqiniseka kanjani ukuthi abantu bangakhetha impendulo ebangeni elithile. Amaphesenti wokuzethemba ahumushela ku-z-score, inani lokuphambuka okujwayelekile inani elinikeziwe likude nencazelo.
p = Ukuphambuka okujwayelekile (kulokhu u-0.5%).
Tags: Wokubalaizinga lokuzethembainhlolovo yamakhasimendeWokubala onlineusayizi wesampulausayizi wesampulaUcwaningoukuzethemba kocwaningousayizi wesampula yocwaningoisampula yocwaningoucwaningo z-scorez-amaphuzu
I-E-Commerce Yekhasimende-Okokuqala: Izixazululo Ezihlakaniphile Zento Eyodwa Ongakwazi Ukuyithola Ukuze Zenze Okungalungile